Malunga Nathi- Malunga Propars E-Export
I-Propar yisoftware ye-e-export yehlabathi jikelele ekomkhulu eTurkey evelisa izisombululo zobuchwephesha be-e-commerce kumashishini.
Yasekwa kwi-2013 ngaphakathi komzimba we-Istanbul University Technopolis, i-Propars ibe negalelo kwinkqubo yokuguqulwa kwedijithali yamawakawaka amashishini. Ngelixa evumela amashishini ukuba alawule zonke iimfuno zabo zobugcisa kwi-e-commerce, naye wasebenza njenge-invoyisi esemthethweni / umnikezeli wenkonzo ye-e-archive.
Ngokuhlanganiswa kwe-Ebay.com kugqitywe kwi-2016, igama lokuqala elisemthethweni lithathwe kwintsimi ye-e-export. Ukuqaphela ukuhlanganiswa kwe-Amazon.com kwi-2017, i-Propars yakhethwa njengeProjekthi ye-Pilot nguTürk Telekom ngonyaka ofanayo.
Ngo-2019, iphinde yadityaniswa kumazwe angama-26 kubandakanya iAmazon kunye ne-Ebay, kwaye yangena kuluhlu lweAmazon SPN ngo-2020. I-Propars, isoftware yokuqala kunye nekuphela kwayo eTurkey ebonelela ngokudityaniswa ngokupheleleyo kunye neentengiso zehlabathi, yongeza indawo entsha yentengiso ye-intanethi kwipotfoliyo yayo yonke imihla. Yandisa ngakumbi inethiwekhi yokuthengisa eyinika abasebenzisi bayo ngeyona ndawo iphambili yentengiso yehlabathi neyendawo.
Amashishini aseTurkey asebenzisa iiPropar ukuza kuthi ga ngoku athumele izigidi zeeodolo kumazwe angama-20 ngokusebenzisa ngaphezulu kwe-107 yeemarike ezahlukeneyo zehlabathi. Ngenxa yobume bayo besoftware yehlabathi kunye nephezulu, abathengisi baseYurophu nabaseMelika nabo baqale ukukhetha iiPropar.
Ukuvumela naliphi na ishishini ukuba lithengiselwe kwihlabathi liphela lisebenzisa ulwimi lwazo lwenkobe kuphela, iPropar ihlangabezana nazo zonke iimfuno zobugcisa ezifunekayo kwi-e-commerce ukusuka kwiphaneli enye kwaye igqame kwimarike yehlabathi.
I-Propar yamnkele umgaqo wokwenza idijithali ii-SME kwaye uzivulele kwihlabathi. Imeme ii-SMEs ukuba zithumele kumazwe angaphandle i-e-export kwaye zidale ixabiso elongezelelweyo kuqoqosho lwelizwe, ngamakhulu oqeqesho lwe-e-commerce/e-export elunikeze simahla ukuza kuthi ga ngoku.
Ifikelela kwii-SME ezininzi nangakumbi yonke imihla, kunye namaqabane amaninzi abalulekileyo, ngakumbi iibhanki eziphambili zaseTurkey.
Ishishini elisebenzisa iPropar linokuhlangabezana nazo zonke iimfuno zalo kwi-e-commerce kunye ne-e-export iinkqubo ukusuka kwindawo enye. Iimpawu eziphambili onokuthi ufikelele kuzo kwiiPropar zezi zilandelayo;
Ulawulo olulula lwendawo yentengiso kunye neentengiselwano zebhetshi,
Ukubanakho ukulawula zonke iindawo zentengiso kwiscreen esinye,
Ukulandelela isitokhwe ngokuzenzekelayo,
Iphepha lolawulo lweodolo kunye ne-invoyisi/inkonzo ye-e-archive
Iinkonzo zoguqulo oluzenzekelayo
Ithuba lokufikelela kumaphulo amahlakani oshishino.